မြန်မာထွက်ပေါ်လာပြီး၊ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများကိုလိုက်မှီရန် (ကမ္ဘာ့ဘဏ်) | MoeMaKa Burmese News & Media
ဒေါ်မြတ်မာလာ၊ မူလတန်းပြဆရာမ၊ ဧရာဝတီတိုင်း၊ ညောင်တုန်းမြို့နယ်၊ သူစာသင်ပေးတဲ့ ကလေးများကို မချမ်းသာချင် နေပါစေ၊ ပညာတတ်ရင် ပင်ပင်ပမ်းပမ်း မလုပ်ရစေချင်ဘူး..ဟု ပြောပါသည်။ မြန်မာပြည်တွင် လူဦးရေထူထပ်သော်လည်း လျှပ်စစ်မရှိသော ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်မှ ညောင်တုန်းမြို့နယ်မှ ကျောင်းဆရာမ၏၊ ရင်ဖွင့်စကားသည် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး အရေအတွက် ၂သိန်းကျော်သော ကျောင်းဆရာ၊ဆရာမ အားလုံး၏ ရင်တွင်းမှစကားကို ကိုယ်စားပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ၂မိနစ် ယူတြု ဗွီဒီယို တွင် လျှပ်စစ်၊ အရေးတကြီးလိုအပ်ကြောင်း၊ ညောင်တုန်းမှ ဆရာဝန်ဒေါက်တာလွမ်းဝေ ကလည်းပြောပြပါသည်။ ဆေးခန်းတွင် ညဖက် လူနာများအား ကုသရန် လျှပ်စစ်မီးမရှိသောကြောင့်၊ ခက်ခဲခြင်း၊ ဆေးဝါးများကို ရေခဲသေတ္တာတွင် လှောင်မထားနိုင်မှုကြောင့် ဆေးပြက်ကာ၊ မြို့ပေါ်သွားကုရာမှ အချိန်ကုန်၊ လူပင်ပမ်းရုံမက၊ သေဆုံးရမှုများလည်း ရှိသည် ဟုဆိုသည်။ ထိုကြောင့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ကျေးရွာများသို့ ရောက်ရှိရေး အထူးလိုအပ်ကြောင်း ပြောပါသည်။၊ မြန်မာ ICT မှ နေဘုန်းလတ် (ဘလောက်ကာ) ကလည်း အိုင်တီ၊ မိုဘိုင်းဖုန်း၊ အင်တာနက် ၊ ကွန်ပြူတာ ဘယ်လောက်ပဲ ထုတ်လုပ်၊ ချပေးနေပါစေ. လျှပ်စစ်မရနိုင်လျှင် ကျေးရွာများတွင် ဘာမှလုပ်မရကြောင်းလည်း ပြောသွားပါသည်။..
ယခု ဆောင်းပါးသည် ကမ္ဘာ့ဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌ၏ မြန်မာနိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးရေးခရီးစဉ်၊လျှပ်စစ်စီမံကိန်း အကြောင်း ဆီလျှော်အောင် ကိုးကား၊ ရေးသားထားဖြင်းဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ မှ ၂၀၃၀ (၁၆)နှစ်အတွင် ဒေါ်လာ ၂ဘီလျှံ စီမံကိန်းဖြစ်သည်။ တခါချက်တည်း သုံးမည်မဟုတ်ပါ။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အနာဂါတ် ပိုမိုကောင်းမွန်လာတော့မယ် လို့ ဒေါ်မြတ်မာလာ ကိုယ်တိုင် ယုံကြည်ကြောင်းကိုလဲ ပြောပါသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာ မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကြီး ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့အတူ၊ ဒီမိုကရေစီအစိုးရဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ တိုင်းပြည်ကို တခါးဖွင့်ပေးလိုက်ပါသည်။
နိုင်ငံတကာက မြန်မာနိုင်ငံကို အသိအမှတ်ပြုရန် ကြိုးစားနေချိန် ကမ္ဘာဘဏ် ဥက္ကဥ ဂျင်ယောင်ကင် က ဒေါ်လာသန်းပေါင်း နှစ်ထောင် (US$2billion) အကူအညီ၊ စီမံကိန်းကို ကြေငြာပါသည်။ နိုင်ငံတကာအဆင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကို ၂၀၃၀ မတိုင်မီ မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်း ခံစားနိုင်ဖို့ နဲ့ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်များကို နိုင်ငံသားတိုင်း အသုံးချနိုင်ဖို့ စီမံကိန်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုစီမံကိန်းအောင်မြင်မှုနဲ့အတူ လူနေမှုအဆင့်အတန်း၊ အလုပ်အကိုင်များ နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါမယ်။
“ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ရရှိစေခြင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံလိုမျိုးမှာ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကို ပြောင်းလဲသွားစေမှာ ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများ ညအခါ စာကြိုးစားနိုင်မည်။ ဈေးဆိုင်များလည်း ညအခါ ဖွင့်နိုင်မည်၊ ဆေးခန်းများလည်း ညအခါ ဖွင့်နိုင်ပြီး၊ လူများ၏ အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ဆင်းရဲမွဲတေခြင်းကို လျှပ်စစ်ဖြင့် ရပ်တံ့သွားစေမည် ဟု ကမ္ဘာ့ဘဏ် ဥက္ကဌက ပြောပါသည်။ “
Burma လို့ခေါ်ကြသော မြန်မာနိုင်ငံသည် အာရှအရှေ့ဘက်ပိုင်း အဆင်းရဲဆုံး နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ ၇၀% လူဦးရေဖြစ်တဲ့ သန်းပေါင်း ၄၀ကျော်ဟာ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားလိုင်းမရှိ၊ အမှောင်ဘဝ နဲ့ လျှပ်စစ်မီးကို တခါတလေမှ အလှည့်ကျရရှိတာ သူတို့အတွက် ဘာမှမထူးဆန်းပါဘူး။ အလွန်သေးငယ်တဲ့ ငွေပမာဏ (% of GDP) ပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက် အစိုးရဘတ်ဂျတ် ချပေးထားပါသည်။ ၅နှစ်အောက် ကလေးသူငယ် ၃၅% ဟာ အဟာရမပြည့်ခြင်းကို ခံစားနေရပါသည်။ လုပ်ငန်းများအဆင်မပြေမှု (ease of doing business) မှာလည်း ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ ၁၈၉ နိုင်ငံမှာ အဆင့် ၁၈၂ ဖြစ်နေပါသည်။
သို့သော်လည်း မြန်မာအစိုးရသည် အခြေအနေကို ပြောင်းပြန်လှန်ရန် ကြိုးစားပါသည်။ စီးပွားရေး တိုးတက်မှုကို ဓါတ်ငွေထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် သွင်း/ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းများဖြင့် ယမန်နှစ်က ၆.၅% တိုးတက်စေခဲ့သည်။ ယခုနှစ်တွင် ၆.၈% တိုးတက်ရန် မှန်းထားပါသည်။ မြန်မာအစိုးရသည် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရာတွင် ကမ္ဘာ့ဘဏ် အုပ်စု အပါအဝင် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လက်တွဲလုပ်ဆောင်ရာတွင် အခြေခံအဆောက်အဦ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမားရေးနှင့် စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများကို ဆောင်ရွက်နေပါသည်။
တိုင်းပြည်သည် တိုးတက်နှုန်းမြင့်သော အိန္နိယ၊ တရုပ် စသည့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများကို မှီရန် အလောတဆယ် ကြိုးစားနေပါသည်။ အများကြီးလုပ်ရမည်. ဟု ကမ္ဘာ့ဘဏ်ဒေသမန်နေဂျာ Shankar ကပြောပါသည်။
ကမ္ဘာ့ဘဏ် ရန်ကုန်တွင် ရုံခွဲဖွင့်ပြီးသည့် ၁၈လ ကာလအတွင်း ပရိုဂျက်၂ခုနှင့် ရေပိုက်လုပ်ငန်းများစွာ စတင်ခဲ့သည်။ ကုန်ကျငွေများကို ကမ္ဘာ့ဘဏ် အုပ်စု၏ အဆင်းရဲဆုံးသော နိုင်ငံများအတွက် အိုင်ဒီပီ IDP International Development Association ရံပုံငွေမှ ရရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ ထိုရံပုံငွေသည် ပုဂ္ဂလိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို အားပေးမြှင့်တင်ရန် ဖြစ်ပြီး၊ စီးပွားရေးရင်းနှီးမြှတ်နှံမှုများကို အာဏာပိုင်များ၏ ဝင်စွတ်ဖက်မှုများမှ အာမခံ၊ ကာကွယ်ပေးနေပါသည်။
ဆင်းရဲမွဲတေမှု အဆိုးဆုံးခံစားနေသူများကို ထောက်ပံသည့် IDP ရံပုံငွေမှ ဒေါ်လာသန်း၂၀၀ကို သုံးစွဲမှာဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၃၀ မှာ နိုင်ငံတကာကျန်းမာရေးအကာကွယ်ပေးမှု Universal Health Coverage အထူးသဖြင့် မိန်းမများနဲ့ ကလေးသူငယ်များအတွက် သုံမှာဖြစ်ပါသည်။ ပိုက်ဆံပေးစရာမလိုပဲ ဆင်းရဲပြီး၊ မကျန်းမာသူများကို ကုသပေးမဲ့ စီမံကိန်းဖြစ်ပါသည်။ နောက်ထပ် ကန်ဒေါ်လာ သန်း၈၀ ကတော့ ကျေးရွာ၊လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကျောင်း၊ လမ်း၊ ရေရရှိရေး စတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် သုံးမှာဖြစ်ပါသည်။ ကန်ဒေါ်လာ ၃၁.၅သန်း သုံးစွဲမဲ့ ကျေးရွာတွေမှာ သည်လီဖုန်း၊ ဆက်သွယ်ရေးရရှိဖို့၊ ကန်ဒေါ်လာ သန်း၃၀ အသေးသုံးငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲဖို့၊ ကန်ဒေါ်လာ သန်း၆၀ ကျောင်းသားများကို ပညာသင်ဆုပေးဖို့ စတဲ့ ပရောဂျက်များ ဘတ်ဂျတ်ချထားပါပြီ။
Expanding access to electricity inacountry like Myanmar can help transformasociety – children will be able to study at night, shops will stay open, and health clinics will have lights and energy to power life-saving technology. Electricity helps bring an end to poverty. Close Quotes
စွမ်းအင်များကို အသုံးချနိုင်ဖို့ ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ဒေါ်လာသန်း ၁၄၀ စိုက်ထုတ်ပေးသည့် ပရိုဂျက်ကို မွန်ပြည်နယ်ခေတ်မှီရေး၊ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား တိုးချဲ့ရေး အတွက် လုပ်နေပြီဖြစ်ပါသည်။ သဘာဝဓါတ်ငွေသုံးပြီး လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်လုပ်ရာမှာ အဆိုပါ ပရိုဂျက်က ထုတ်စွမ်းအား အဆ၂၅၀% တိုးတက်စေမှာဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ သဘာဝဓါတ်ငွေတစ်အိုးမှ လျှပ်စစ် ယူနစ် ၁၀၀ ထုတ်ရာမှ၊ ယူနစ်၂၅၀ တိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်နိုင်မည်၊ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား များစွာ ထုတ်လုပ်ပြီး မဟာဓါတ်အားလိုင်းကို ထည့်နိုင်မည် ဟု ဆိုသည်။
ရေရှည်စီမံကိန်းအဖြစ် အမျိုးသား လျှပ်စစ်ရရှိရေး မဟာဗျူဟာ ရှိရမည်၊ စွမ်းအင်ရနိုင်သမျှကို ထိုးထွင်းဥာဏ် အသုံးချရမည်။ လျှပ်စစ်ဖြန့်ဖြူးရာတွင် စိတ်ချရသော၊ ရေရှည်အသုံးခံသော ဝန်ဆောင်မှုကို လူဦးရေ သန်း၆၀ အတွက် နှစ်ရှည်စီမံကိန်း ဗျူဟာ ဖြစ်ရပါမည်။ မဟာဓါတ်အားလိုင်းမရှိသော နေရာများတွင် နေရောင်၊ လေအား၊ ရေအား စသည့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း ထိုးထွင်းဥာဏ်သုံးပြီး၊ ဗျူဟာများ ချမှတ်ရမည်။
အခြား ကမ္ဘာ့ဘဏ် ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သော IFC မှ အသေးစား၊ ငွေချေးလုပ်ငန်းများအတွက် လုပ်ငန်းငယ်ပေါင်း ၂သိန်း၊ အထူးသဖြင့် မိန်းမများ လုပ်ကိုင်သော ဈေးရောင်း၊ ဟင်းသီရွက်ရောင်း၊ မုန့်ရောင်း လုပ်ငန်းများအား ထောက်ပံ့ ချေးငှားပေးရန်ရှိသည်။ လုပ်ငန်းငယ်များ အတွက် ငွေချေးပေးပြီး၊ အမြတ်အစွန်းရှိအောင် ကူညီကြည့်ရှုပေးသော မိုက်ကရိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖြစ်သည်။ မိန်မများသည် အိမ်ထောင် စားဝတ်နေရေးကို အဓိကဖြစ်သောကြောင့် အိမ်အနီးနားတွင် လုပ်ငန်းများလုပ်ရင်း၊ တနိုင်ဝင်ငွေ ရရှိစေပါသည်။ အသုံးဖြုန်းကြီးသော လင်ယောင်္ကျားများရန်မှာ ကာကွယ်ထားဖို့၊ အရင်းပြုတ်မသွားရန်လည်း ပညာပေး၊ စောင့်ကြည့်ပေးသည့် ပရိုဂျက်ဖြစ်သည်။ ဆင်းရဲမွဲတေမှုကို နည်းပါးသွားစေရန် အိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းများကို ကူညီခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ အသေးစားငွေချေးခြင်းကို မြန်မာနိုင်ငံ စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဌာနမှလည်း လုပ်ကိုင်နေပါသည်။ ငွေတိုးချေးစားသကဲ့သို့ ဖြစ်နေပြီး၊ လုပ်ငန်းများကို အောင်မြင်ရန် ကူညီ၊ ပညာပေး၊ ပံ့ပိုးမှု နည်းပါးသေးသည်။
မြန်မာလူထုအတွက် လူတို့ အခြေခံ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနေသည် ဟု IFC မြန်မာနိုင်ငံ တာဝန်ခံ Kumar က ပြောသည်။ အသေးစားနှင့်အလတ်စား လုပ်ငန်းများ SME Small & Medium Enterprises အားကောင်းစွာ ပေါ်ထွက်လာတဲ့ တနေ့သည် အလုပ်ကိုင် များစွာ ပေါ်လာမည် ဟု ဆိုသည်။ ထိုနည်းလမ်းဖြင့် ဆင်းရဲမွဲတေမှု ပပျောက်ရန် လူအချင်းချင်း ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ကာ၊ ကြွယ်ဝလာစေမည့် အခြေခံမူများဖြစ်သည်။
မြန်မာလျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာနသည် IFC ၏ အကြံပေးခြင်း၊ တိုင်ပင်မှုများ လုပ်ဆောင်နေသည်။ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ပူးပေါင်းပြီး လျှပ်စစ် ထုတ်လုပ်၊ ဖြန့်ဖြူးရန် လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် အခြေခံ သဘောတူချက်များ ရရှိရန်ဖြစ်သည်။ ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီများသည် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကို တစ်ယူနစ် ဈေးနှုန်းကြီးစွာဖြင့် ရောင်းချပြီး၊ ပြည်သူများကို အမြတ်ထုတ်မည့် ရင်းနှီးမြှတ်နှံစာချုပ်များ လုပ်နေပြီဟု သတင်းဌာနများက ရေးသားကြသည်။ မြို့နေလူထုက တစ်ယူနစ် ၇၀ကျပ်ဖြင့် ရရှိနေသည်။ ထိုဈေးနှုန်းဖြင့်ပင် ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်တွင် ရောင်းချပေးသည်။ အသေးစား လျှပ်စစ်လုပ်ငန်း၊ တစ်ယူနစ် ကျပ်၁၅၀ဖြင့် ရောင်းလျှင်ပင် ကျေးလက်ဒေသများ မီးလင်းပြီး၊ ၃နှစ်နှင့် အရင်းကျေ၊ အမြတ်ထွက်မည် ဖြစ်သည်။ ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ တယ်လီဖုန်း ပြောင်းလဲသွားသောကြောင့် ရင်းနှီးမြှတ်နှံသူများ ဆက်သွယ်ရေးတွင် ပါဝင်လာကြသည်။ နောက် ၅နှစ်အကြာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အခွင့်အလမ်းများစွာ ပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။ ယခုအခါ အခြားနိုင်ငံများ အသုံးသိပ်မပြုသော မိုဘိုင်းဖုန်း ဘဏ်စနစ်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လျှင်မြန်စွာ တိုးတက်နေသည်။
၂၀၁၃ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ အခြေအနေအရ၊ ပြည်ပ ရင်းနှီးမြှတ်နှံမှုများအတွက် ပြည်တွင်းရှိ ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းလေးများစွာ အထူးလိုအပ်နေသည်။ လောင်စာဆီလုပ်ငန်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလည်း အထူးလိုအပ်နေသည်။ ထိုလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်သူများအတွက် အာဏာရှိသူများက လုပ်ငန်းအပိုင်စီး၊ ပျက်ပြားအောင် မလုပ်ရန်၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်က အကာကွယ်ပေး၊ အာမခံပေးခြင်းကို လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံလုပ်ငန်းရှင်များ Political Risk စိုးရိမ်ပါက ကမ္ဘာ့ဘဏ် အေးဂျင့် Multilateral Investment Guarantee Agency ကို ဆက်သွယ်ရန် ဖြစ်သည်။
မြန်မာ ပြည်သူလူထုသည် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအတွက် အထူး အားသန်နေကြသည်။ လုပ်ချင်စိတ်အား ကြီးနေကြသည်။ ထိုအချက်သည် နိုင်ငံအစိုးရအတွက် အခွင့်အရေးကြီးဖြစ်သလို၊ ရင်ဆိုင်ရမည့် စိမ်ခေါ်ချက်ကြီးပင် ဖြစ်ပါတော့သည်။
● နိဂုံး -ကမ္ဘာဘဏ် ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူညီ
အထက်ပါ ကမ္ဘာဘဏ်မှ ထုတ်ပြန်ချက်ကို ကမ္ဘာ့ဘဏ် ဝက်ဆိုဒ် www.worldbank.org ဇန္နဝါရီ ၂၆၊ ၂၀၁၄ ထုတ်ပြန်ချက်ကို မှီငြမ်းထားပါသည်။ ၂မိနစ် ဗီဒီယိုလည်း ပါဝင်သည်။ သတင်းဆောင်းပါးဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ အသစ်ဖွဲ့စည်းထားသော ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးမှ ကျေးရွာသုံးရာကို တစ်ရွာ သိန်း၁၀၀၀၊ စုစုပေါင်း သိန်း၃၀၀၀၀၀ (ကန်ဒေါ်လာ ၃သန်း) စတင်သုံးစွဲနေပါသည်။ တကယ်တော့ ဒေါ်လာသန်းတစ်ထောင် ဆိုသည်မှာ လက်ရှိ မြန်မာ့တမျိုးသားလုံး ထုတ်ကုန်၏ ၂% 2% of GDP သာ ရှိပါသည်။ အဝီစီရေတတွင်းကို ၁၀သိန်း၊ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးစက် 1000w ကို ကျပ်၁၅သိန်း ဘာမှမကုန်ပါဘူး။ လူတွေရဲ့ အဂတိလိုက်စားမှုနဲ့ ပညာနည်းပါမှုတွေဟာ အောက်ခြေထိ စိမ့်ဝင်နေတဲ့အတွက် ဥပမာ ..ရွာလမ်း လမ်းပျက်သွားလို့ နှစ်စဉ် ဖာထေးသုံးလိုက် နေတဲ့သဘောပါပဲ။ ဒါတွေကို ကမ္ဘာ့ဘဏ်နဲ့ မြန်မာအစိုးရက သိပါသည်။ သို့သော်… ကြက်ဆူမဟုတ်၊ နေရောင်ခြည်မဟုတ်သော စွမ်းအင်ကို သမရိုးကျနည်းဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ရန် ကမ္ဘာ့ပညာရှင်များ အကြံဥာဏ်ကို လက်ခံရန်လိုပါသည်။ မြန်မာ့နည်းမြန်မာဟန်သည် ကောင်းပါသည်။ မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန်ဖြင့် ယခုအချိန်သည် အာဏာရှိသူများအတွက် အလွန် စီးပွားလုပ်စားရန် ကောင်းလှသော အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ အားကစားပွဲဖြင့် မြန်မာများ စိတ်ဓါတ်မြင့်လာသဖြင့် ငွေသိန်းပေါင်းများစွာ ဆုငွေချီးမြှင့်ပါသည်။ ထိုငွေများအစား မြေကွက်၊ အိမ် ပေးခြင်းက ပိုပြီး ပံ့ပိုးရာဖြစ်ပါသည်။ အသုံးများသောကြောင့် ၂၀၁၃ ဘတ်ဂျတ် လိုငွေများစွာ၊ အရံငွေကြေးလဲ ကျဆင်းသွားသဖြင့် နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးဌာနမှ ငွေစက္ကူထပ်မရိုက်နှိပ်ရန် သတိပေးခြင်းကို တွေ့ရပါသည်။ ကမ္ဘာ့ဘဏ် လျှပ်စစ်ပြသနာမှာ ပုဂ္ဂလိကစီးပွားလုပ်ရန် မြို့နယ်ဒေသခံများကို ကမ္ဘာဘဏ်နှင့်နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ ပူးပေါင်းပြီး၊ တကယ်လုပ်မည့် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင် SME များကိုသာ ငွေကြေး၊ နည်းပညာအကူညီပေးပြီး၊ ပြည်ပမှ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားထုတ်စက် အခွန်မဲ့ တင်သွင်းခွင့်၊ လောင်စာဆီ (သို့မဟုတ်) သဘာဝဓါတ်ငွေ အစိုးရမှ ရောင်းချပေးနိုင်လျှင် အချိန်တိုအတွင် ပြေလည်သွားနိုင်ပါသည်။ သို့မှသာ ဒေသခံ ခရိုနီများ၏ လက်ဝါးအုပ်၊ အမြတ်ထုတ်၊ ဈေးကြီးသော လျှပ်စစ်ကို ဝယ်သုံးနေခြင်းမှ လွတ်မြောက်မည်ဖြစ်သည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ လူငယ်လူရွယ်များသည် စာရိတ္တ မှန်ကန်စွာ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးသာမက၊ မြို့ပြ၊ စက်မှု ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလည်း ထိရောက်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်သူများဖြစ်သည်။ စာရိတ္တပညာကို အစိုးရ စာသင်ကျောင်းများနှင့် ဘုန်းကြီးကျောင်းများမှသာ ထိရောက်စွာ သင်ကြားနိုင်ပါသည်။ IFI Watch (88 generation) အဖွဲ့လည်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေသည်ဟု သိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရအရာရှိကြီးများ ပေါ်လစီများ၊ ငွေများ ထုတ်သုံး၊ ဆုချ နေသည်ထက် စာရိတ္တ စံနမူနာ ခေါင်းဆောင်များ ဖြစ်ခြင်းသည် ဆင်းရဲမွဲတေမှုကို အောင်နိုင်သည့် တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းဖြစ်သတည်။
Ref2min Video
One Response to မြန်မာထွက်ပေါ်လာပြီး၊ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများကိုလိုက်မှီရန် (ကမ္ဘာ့ဘဏ်)
zaw on January 28, 2014 at 9:55 am